नुहाउने बिहान कि बेलुका ? | NepalDut
नुहाउने बिहान कि बेलुका ?
नुहाउने समय स्थितीमा निर्भर हुन्छ जस्तै तपाईंको छालाको प्रकार, तपाईंको कामको प्रकार र तपाईं कति प्रदूषण वा धुलोसँगको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ । तपाईंले नुहाउने सही तरिकालाई यसरी छान्नुहोस् ।
तपाईंले बिहान नुहाउनुपर्छ यदि तपाईंको छाला चिल्लो छ भनेः विशेषज्ञका अनुसार चिल्लो छाला भएका मानिसहरुले बिहान नुहाउँदा फाइदा हुन्छ । यसो गर्दा छाला राम्रो हुन्छ ।
यदि तपाईं मेकअप गर्नुहुन्छः
त्यसकारण नुहाउने निर्णय आफ्नो शरिर वा दिनचर्याको हिसाबले गर्नुहोस् । तर धेरै पटक नुहाउनबाट बच्नुहोस् ।
धेरै नुहाउँदा तपाईंको शरिरको गुड ब्याक्टेरिया जस्तै तपाईंको रक्षा गर्दछ, लाई नष्ट हुन सक्छन् र तपाईंको छाला संक्रमण हुने आशंका बढ्ने गर्दछ ।